Alfa Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Raha mpanjifa amin'ny banky Alfalah ianao dia misy vaovao tsara ho anao rehetra. Bank Alfalah dia manolotra ny fampiharana Android, izay fantatra amin'ny anarana hoe Alfa Apk. Manolotra anao ny fahazoana miditra amin'ny kaonty sy ny antsipirian'ny kaontinao, ahafahanao mitantana ny kaontinao sy miditra amin'ireo endrika hafa.
Araka ny fantatrao, Bank Alfalah dia iray amin'ireo banky tsy miankina lehibe indrindra eran-tany. Any Pakistana, manolotra sampana mihoatra ny 600+ izy ary noho ny teknolojia farany dia manatsara ihany koa ny rafi-pitantanana ny mpanjifa sy ny fitantanana kaonty.
Izy io dia iray amin'ireo mpamatsy tolotra iraisam-pirenena, izay manolotra serivisy any amin'ny firenena hafa koa. Ny sasany amin'ireo firenena hafa dia Bangladesh, Afghanistan, UAE, ary Bahrain. Izy io dia manome ny rafitra Banky Silamo tsara indrindra amin'ny dingana voalohany. Ho an'ny mpanjifa, manome mora ihany koa ny fidirana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity.
Azonao atao ny mahafantatra ny hetsika kaonty isam-bolana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity, izay dingana iray tena lehibe talohan'ity fampiharana ity. Betsaka kokoa ny fiasa sy serivisy an'ity fampiharana ity izay mety ho tianao ho fantatra. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny dia hizara ny momba an'ity rindranasa ity izahay.
Topimaso momba ny Alfa Apk
Izy io dia fampiharana Android maimaim-poana, izay novolavolain'ny Bank Alfalah Limited. Manolotra ireo mpampiasa ny banky Alfalah izy mba hitazona ny kaontiny ary hanana fidirana mora amin'ny endri-javatra samihafa. Noho izany, andeha isika hanomboka amin'ny endri-javatra, izay azo idirana.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny kaonty kaonty. Izy io dia manolotra anao hanamarina ny antsipirian'ny kaontinao nandritra ny telopolo andro farany. Sarotra ny dingana, talohan'ity fampiharana ity. Tsy maintsy mitsidika sampana rehetra ianao ary miandry ny anjaranao amin'ny lisitra lava be ary farany dia manana ny fanambarana ianao. Saingy eto dia mila manindry fotsiny ianao.
Manolotra anao izy handoa ny faktiora amin'ny carte de crédit anao ary azonao atao ihany koa ny mahalala ny vaovao mifandraika amin'ny carte de crédit. Manolotra antsipiriany momba ny carte de crédit toa ny fandoavam-bola farafahakeliny azony alaina, teboka valisoa vaovao, ary voalaza koa ny daty tokony handoavana ny faktiora.
Banky an-tserasera App dia manolotra anao hanova ny mombamomba ny kaontinao amin'ny alàlan'ity app ity. Azonao atao ny manova ny adiresy sy ny hafa. Azonao atao mihitsy aza ny mangataka ny Check book an-tserasera ary azonao atao koa ny mamindra vola. Raha lany recharge amin'ny finday ianao dia azonao atao ihany koa ny mamelona azy io.
Manolotra tracker toerana izy io, ahafahanao mahita ny sampana akaiky indrindra na ny ATM misy. Azonao atao koa ny mahita ny antsipiriany momba azy, toy ny fotoana misokatra sy ny hafa. Raha te hividy na inona na inona ianao, dia misy Alfala mall azonao ampiasaina, ahafahanao mividy entana elektronika sy maro hafa.
Misy lafin-javatra maro hafa, azonao zahana aorian'ny fampiasana an'ity fampiharana ity. Fa raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindranasa ity ianao, dia manome fidirana tsotra amin'ny fikarakaran'ny mpanjifa izany, izay hahazoana antoka fa voavaha ny olanao.
Anaran'ny fonosana com.base.bankalfalah
mpandraharaha Bank Alfalah Limited
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4.4 ary ny
Endri-javatra manan-danja amin'ny Alfa App
Niezaka izahay nizara saika ny serivisy rehetra azonao idirana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Misy lafin-javatra lehibe sasantsasany, izay hozarainay aminao amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra. Raha te hizara ny zavatra niainanao ianao dia aza misalasala mampiasa ny fizarana hevitra.
Maimaimpoana ny misintona
Maimaim-poana ny fidirana amin'ny mpanjifa Alfalah
Manolotra antsipirian'ny kaonty izy io.
Manova ny mombamomba anao
Mandoa faktiora amin'ny Internet ary koa faktiora ilaina
Ahoana ny fomba fampidinana Alfa Apk
Azo alaina ao amin'ny Google Play Store ny misintona azy, fa raha manana olana ianao amin'ny fisintomanao azy amin'ny Google Play Store. Manolotra rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity koa izahay. Mila tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Alfa Apk no fampiharana tsara indrindra hitantanana ny kaonty Bank anao amin'ny alàlan'ny Smartphone. Saingy mety hiteraka korontana ny fizarana ny mombamomba anao amin'ny fidirana amin'ny hafa. Aza zaraina amin'olon-kafa. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa azy.
Sokajy Apps, Finance Tags Alpha, Alfa Apk, App Alfa, Banky an-tserasera Post Fikarohana